एनआरएनए नवौं महाधिवेशन आजबाट काठमाडौँमा - Pahilo Click
एनआरएनए नवौं महाधिवेशन आजबाट काठमाडौँमा
काठमाडौं: विदेशिएका नेपालीहरूको हक–हितका लागि भनेर स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।
होटल ह्यातमा हुने सम्मेलन ३० असोजसम्म सञ्चालन हुनेछ । एनआरएनएले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट महाधिवेशन उद्घाटन गराउने तय भएको जनाएको छ ।
हरेक २ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार, एनआरएनएले नवौं महाधिवेशन गर्न लागेको हो ।
सिट ४२, आकांक्षी धेरै
नवौं महाधिवेशनले आगामी कार्याकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयनलगायतका महत्त्वपूर्ण सांगठनिक निर्णय गर्नेछ । एनआरएनएमा अध्यक्षसहित कुल १२ पद छन् । यी पदहरूमा ४२ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, सीमित पदहरूमा धेरैले आकांक्षा देखाउने गरेपछि अघिल्ला महाधिवेशनदेखि नै एनआरएनएमा रोचक चुनावी भिडन्त हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि विगतझैं कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ ।
अध्यक्षका लागि यसपटक हालका दुई उपाध्यक्ष कुमार पन्त र कुल आचार्य मैदानमा छन् । पन्त वाम र आचार्य प्रजातान्त्रिकनिकट मानिन्छन् । दुवैले नयाँ नेतृत्वका लागि आफू योग्य भएको दाबी गर्दै चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचार तीव्र पारेका छन् ।
उपाध्यक्षमा एक महिलासहित ५ उम्मेदवार एनआरएनएले छनोट गर्नुपर्नेछ । यसअघि प्रायः सहमतिमा यी पद पूर्ति हुने गरे पनि यसपटक अध्यक्षको तुलनामा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । उपाध्यक्षका लागि आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहे पनि खासगरी डा. बद्री केसी, सोनाम लामा, रवीना थापा, डा. केशव पौडेल, नरेन्द्र भाट, हिक्मत थापा, अर्जुनकुमार श्रेष्ठबीच कडा टक्कर पर्ने अनुमान गरिएको छ । पन्तको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नुवाकोट तारुकाका धर्मराज अधिकारीलाई पनि बलिया उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।
महाधिवेशनले १ महासचिव, २ सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, महिला संयोजक र युवा संयोजकमा १/१ जना निर्वाचित गर्नेछ । यी पदमा पनि धमाधम उम्मेदवारी घोषणा भइरहेका छन् ।
प्रत्येक क्षेत्रीय समितिबाट एक/एक गरी ६ जना क्षेत्रीय संयोजकहरु विश्व सम्मेलनबाट निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी, क्षेत्रीय उपसंयोजकअन्तर्गत यसपटक युरोप क्षेत्रबाट ३ जना निर्वाचित हुने एनआरएनएले जनाएको छ । विधानबमोजिम युरोपमा ३ जना क्षेत्रीय उपसंयोजक हुने निर्वाचन समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एसिया प्रशान्त, अफ्रिका र मध्यपूर्वबाट २/२ जना क्षेत्रीय उपसंयोजक छानिने छन् भने उत्तर–दक्षिण अमेरिका र ओसेनियाबाट १/१ जना क्षेत्रीय उपसंयोजक चयन हुनेछन् ।
प्रत्येक क्षेत्रबाट १/१ जनाका दरले ६/६ जना क्षेत्रीय महिला संयोजक र क्षेत्रीय युवा संयोजक चुनिने समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौं उत्रिए २५ सय प्रतिनिधि
विभिन्न पेसा–व्यवसायको सिलसिलामा ८० लाख नेपाली देश बाहिर रहेको अनुमान छ । एनआरएनएमा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका यिनै नेपालीहरू संगठित छन् ।
आफ्नो छाता संगठनको सांगठनिक सुदृढीकरण, नयाँ नेतृत्व चयनलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय महाधिवेशनमार्फत हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा चटारो बढेको छ । एनआरएनएले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार, सम्मेलनमा सहभागिताका लागि २५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
निर्वाचन एकै दिनमा
काठमाडौंमा सम्मेलन उदघाटनको भोलिपल्ट अर्थात बुधबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रियादेखि मतदानको प्रक्रियासम्म चल्नेछ ।
बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मतदान भइसक्ने र निर्वाचन सम्पन्न भएको एक घण्टामा मतगणना गर्ने समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या दैनिक २० हजारबढी, कोभिड-१९ संक्रमण काठमाडौँमा देशभरीमध्येकै सर्वाधिक
काठमाडौँ: कोभिड–१९ को जोखिमकाबीच काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा मानवीय चाप बढ्न थालेको छ...
हिमालयलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा दिने निर्णय खारेज गर्न निगमको प्राधिकरणसँग माग
काठमाडौँ: राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले निजी क्षेत्रको...
काठमाडौँ: प्रा डा खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दा दर्ता भएको...
काठमाडौं: विश्व बैंकले मंगलबार नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास...
५२ जिल्लामा कोभिडको नमूना परीक्षण शुरु
इमाजिन नेपालद्वारा काठमाडौँदेखि रारासम्मको गन्तव्य तय
आइतबार साँझ पुनः पर्सामा ठुलो हुरी, पाँच घाइते, टावरहरुमा क्षती